Omenala ndị China | Akụkọ njem
Mariela Carril | 07/09/2021 17:00 | China, omenala
China ọ bụ obodo mara mma nke nwere puku afọ, ọgaranya na omenala dị iche iche. Ọ dị ka ụwa dị iche, nwere asụsụ ya, ememme ya, zodiac nke ya, ụdịdị ya ... ma ọ bụrụ na ọ dị mfe ịsụ Chinese, echere m na ụmụ akwụkwọ asụsụ ahụ ga -enwe ọganihu. Mana asụsụ Chinese dị mgbagwoju anya ...
Ka anyị ghara ịkwa ụta, taa anyị ga -ekwu maka oke Omenala China.
2 Omenala ndị China: okpukperechi
3 Omenala ndị China: nri
4 Omenala ndị China: zodiac
5 Omenala ndị China: ememme
China ọ bụ obodo kacha buo ibu n'ụwa, nwere ihe karịrị ijeri ijeri 1400 na ọ na -ewe ọtụtụ izu iji gụchaa ọnụ ọgụgụ mba oge ọ bụla. Na mgbakwunye, ruo oge ụfọdụ ugbu a na aka na echiche nke "sistemụ abụọ, otu mba" (ikeketeorie na socialism), ọ bụrụla ike akụ na ụba ụwa mbụ.
China nwere ógbè iri abụọ na ise, ógbè ise nwere onwe, obodo anọ n'okpuru okirikiri orbit na mpaghara nchịkwa abụọ pụrụiche bụ Macao na Hong Kong. Ọ na -azọrọ Taiwan, dị ka mpaghara ọzọ, mana agwaetiti ahụ ka bụ mba nweere onwe ya kemgbe mgbanwe China.
Ọ bụ nnukwu mba na nwere ókèala ya na mba iri na anọ y ọdịdị ala ya dị iche iche. E nwere ọzara, ugwu, ndagwurugwu, canyons, steppes, na subtropics. Omenala ya dị otu puku afọ kemgbe mmepeanya China mụrụ ọtụtụ narị afọ gara aga.
Ọ bụ n'oge ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị afọ iri ya niile ka ọchịchị eze, mana na 1911 agha obodo mbụ mere nke kwaturu usoro ndị eze ikpeazụ. N'echiche a, ana m akwado ịhụ nke ukwuu Emperor ikpeazụ, ọmarịcha ihe nkiri Bernardo Bertolucci.
Mgbe njedebe nke Agha nke Abụọ na mwepu nke Japan na mpaghara China ndị Kọmunist meriri agha obodo na a manyere ha ịmanye gọọmentị. Ọ bụ mgbe ahụ ka ndị China meriri meriri kwagara Taiwan wee hiwe steeti dị iche, nke a na -ekwu site na ala. Ka oge na -aga, afọ mgbanwe ga -abịa, agụmakwụkwọ onye ọhaneze, ugbo mkpokọta, ụnwụ nri na n'ikpeazụ, ụzọ dị iche nke tinyere obodo ahụ na narị afọ nke XNUMX.
Omenala ndị China: okpukperechi
Ọ bụ ọtụtụ okpukperechi obodo ebe ha bi Okpukpe Buddha, Tao, Islam, ndị Katọlik na ndị Protestant. Ebe iwu obodo dị ugbu a na -asọpụrụ nnwere onwe ife ofufe ma bụrụkwa akụkụ dị oke mkpa nke ndị mmadụ.
Okpukpe ndị a nwere ọnụnọ n'ọtụtụ obodo na China, dabere na agbụrụ nke bi ebe ahụ. Ọ bara uru ịkọwa nke ahụ e nwere ihe karịrị agbụrụ iri ise na China, n'agbanyeghị na ọtụtụ n'ime ha bụ Han, mana ọ bụ eziokwu na omenala ndị China n'ozuzu gafere Taoism na Confucianism, ebe ọ bụ nkà ihe ọmụma ndị a na -ejupụta kwa ụbọchị.
Ọtụtụ ndị China na -eme emume ụfọdụ okpukpe, ma ọ bụ na ha nwere ezi nkwenye ma ọ bụ akụkọ ifo. Ekpere ndị nna nna, ndị isi, mkpa ụwa nkịtị ma ọ bụ nkwenye nzọpụta na -adịgide. Nke ka njọ bụ na, taa, ọ bụghị na otu n'ime okpukpe ndị a bụ imirikiti ma amanye ya. Ha niile bụ, ee, ha merela agadi ma baa ọgaranya na ngalaba si na ha dapụ ebe niile.
El buddhism ọ na -amalite n'India ihe dị ka puku afọ abụọ gara aga. Ndị Han Han na -abụkarị ndị Buddha, dịkwa ka ndị bi na Tibet. N'ime obodo enwere ọtụtụ saịtị okpukpe Buddha dịka Wild Goose Pagoda ma ọ bụ Templelọ nsọ Buddha Jade.
N'aka nke ọzọ, Taoism bụ nwa afọ ọ dịkwa ihe dị ka otu puku afọ na narị asaa. Ọ bụ Lao Tzu hibere ya ma dabere n'ụzọ Tao na "akụ atọ", ịdị umeala n'obi, ọmịiko na ịdị ọnụ ala. Ọ nwere ọnụnọ siri ike na Hong Kong na Macao. Banyere saịtị Taoist, ọ dị n'Ugwu Shai na mpaghara Shandong ma ọ bụ ụlọ nsọ nke Chineke City, na Shanghai.
Enwekwara ohere maka nke Islam na China, sitere na mba Arab ihe dị ka afọ 1.300 gara aga ma taa o nwere ihe dị ka nde mmadụ iri na anọ ndị kwere ekwe nọ na Kazak, Tatar, Tajik, Hui ma ọ bụ Uyghur, dịka ọmụmaatụ. Yabụ, enwere nnukwu ụlọ alakụba nke Xi'an ma ọ bụ ụlọ alakụba Idgar, na Kashgar.
N'ikpeazụ, Iso Christianityzọ Kraịst na ụdị ndị ọzọ nke Iso Ụzọ Kraịst si China na -eme nchọpụta na ndị ahịa.
Omenala ndị China: nri
Hụrụ ya n'anya. Kedu ihe m ga -ekwu? Ana m asọpụrụ nri ndị China, Ọ dị oke iche na ngwa nri na ụzọ esi esi nri na ọ gaghị ekwe omume ịnwụ na ụtọ ndị o nwere. Ihe ị kwesịrị ịma gbasara omenala nri ndị China bụ nke ahụ E kewara ya na mpaghara nwere ụzọ esi esi nri.
N'ihi ya, anyị nwere nri nke North China, West, Central China, East na South. Onye ọ bụla nwere ụtọ ya, ihe ndị mejupụtara ya na ụzọ esi esi nri. Ndị China na -enwe mmasị iri nri ma na -agbasokarị akara eche. Ebe onye ọbịa nke ọ bụla na -anọdụ dị mkpa, n'ihi na ịbụ onye ọbịa dị nsọ na ịbụ onye nke ọzọ abụghị otu. Ruokwa mgbe onye ahụ pụrụ iche na -eche na ọ nweghị onye na -eme ya. Ịkwesịrị ịme achịcha mbụ.
N'oge nri ehihie, ị ga -ebu ụzọ hapụ ndị okenye ka ha buru ụzọ mee ya, ị ga -eburu nnukwu efere ahụ ka ndị ọzọ na -eme, enwere usoro ụfọdụ n'ime mkpịsị aka gị, ọ dị mma iburu nri ahụ n'efere dị gị nso ka ọ ghara ịgbatị na tebụl na inye nsogbu, emejula ọnụ gị, jiri ọnụ juputara kwuo, araparala nkịrịkakụ na nri mana kwado ha n'ụzọ kwụ ọtọ, ihe dị otu a.
Paragraf dị iche kwesịrị ya tii na china. Ọ bụ ọdịbendị niile. A na -emepụta tii ebe a ma na -eri ya ụbọchị niile, kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị chere na enwere naanị oji, ọbara ọbara na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ tii ... ị dị oke njọ! Jiri ohere njem gị mụta ihe niile gbasara tii. A na -ekpebi ịdị mma tii na isi, ụcha na ụtọ, mana ịdị mma nke tii na ọbụna iko ahụ bara uru. Gburugburu ebe obibi dịkwa mkpa, ọ bụ ya mere eji akpachapụ anya na ikuku, usoro, ma egwu dị ma ọ bụ na ọ nweghị, odida obodo ...
Enwere njem nlegharị anya pụrụ iche iji mụta maka akụkọ ihe mere eme tii na nkà ihe ọmụma China.
Omenala ndị China: zodiac
Zodiac ndị China ọ bụ okirikiri afọ iri na abụọ na afọ na-anọchite anya anụmanụ nke nwere njirimara ụfọdụ: oke, ehi, agụ, oke bekee, dragọn, agwọ, ịnyịnya, ewu, enwe, ọkpa, nkịta na ezi.
Este 2021 bụ afọ ehi, akara ngosi ọdịnala nke ike na omenala ndị China. A na -echekarị na afọ ehi ga -abụ afọ ga -akwụ ụgwọ ma weta chioma. Enwere ihe ịrịba ama ndị a na -ewere dị ka chi ọjọọ? Ee ọ dị ka ọ dịghị mma ịmụ n'afọ ewu, na ị ga -abụ onye na -eso ụzọ ọ bụghị onye isi ...
N'ụzọ dị iche, ọ bụrụ na amụrụ gị n'afọ nke dragọn ahụ ọ bụ ihe ịtụnanya. N'ezie, ndị amụrụ n'afọ nke dragọn, agwọ, ezi, oke ma ọ bụ agụ bụ ndị kacha nwee ihe ọma.
Omenala ndị China: ememme
Site n'ọdịbendị bara ụba dị otú a, nke bụ eziokwu bụ na ememme na mmemme ọdịnala juru eju na mba ahụ. Afọ niile, na a na -ahazi ihe ka n'ọnụ ọgụgụ dịka kalenda ọnwa China. Ememme ndị kacha ewu ewu bụ Ememe etiti mgbụsị akwụkwọ, Afọ Ọhụrụ nke China, Ememme Ice Harbin, Ememme Shoton na Tibet, na Ememe ụgbọ mmiri dragọn.
N'ikpeazụ, ọ bụ eziokwu na enwere mmemme dị ebube na Beijing, Shanghai, Hong Kong, Guilin, Yunnan, Tibet, Guangzhou, Guizhou ... Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịbụ onye akaebe ma ọ bụ onye sonyere na nke ọ bụla n'ime ha, ị kwesịrị lelee ihe ga -eme mgbe ị na -aga.
Na usoro nke ememme ndị mbubata Ha na -emekwa na China, ekeresimesi n'ụbọchị Valentine, ụbọchị ekele ma ọ bụ Halloween, iji kpọọ aha kacha mara amara. Ọ dabara na enwere ụlọ ọrụ njem na -ahazi njegharị na -eburu n'uche ihe omume na mmemme.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » omenala » Omenala china